गोकर्णेश्वर मेयर कपः ५ नं वडाले जित्यो उपाधि, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
गोकर्णेश्वर मेयर कपः ५ नं वडाले जित्यो उपाधि
काठमाडौँ । गोकर्णश्वर नगरपालिकाको सहकार्यमा जोरपाटी फुटबल क्लबद्वारा आयोजित प्रथम वडा स्तरीय गोकर्णश्वर मेयर कप ७ ए साइड फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि वडा नं ५ ले जितेको छ।
शनिबारको फाईनल खेलमा गोकर्णेश्वर वडा नं ५ ले गोकर्णेश्वर वडा नं ८ बी लाई ३–१ गोलअन्तरले पराजित गर्दै प्रथम गोकर्णेश्वर मेयर कपको उपाधि हात पारेको हो।
गोकर्णेश्वर वडा नं ८ बी तर्फका किरण लामाले खेलको १६ औ मिनेटमा गोल गर्दै टिमलाई शुरुआती अग्रता दिलाए। त्यसको ४ मिनेट पछि वडा नं ५ का नविन लम्सालले गोल गर्दै खेललाई बराबरीमा पुर्याए। त्यसपछि वडा नं ५ का प्रबिन पुडासैनीले अर्को गोल गर्दै टिमलाई १–२ को अग्रता दिलाए। यसैगरी दोस्रो हाफको ११ औं मिनेटमा ५ नं वडा कै गोपी भुजेलले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। उत्कृष्ट मानिएका दिनेश राई र गोलरक्षक सुरज लामाले पहेंलो कार्ड पाए।
गोकर्णश्वार नगरपालिका वडा ८ बेसी गाउँ स्थीत नेपालय ईङलिस पब्लिक स्कुलको खेल मैदानमा २१ गतेदेखि सुरु भएको खेलमा उपाधि जितेको गोकर्णेश्वर वडा नं ५ ले १ लाखको पुरस्कार पाएको छ। त्यस्तै दोस्रो बनेको गोकर्णेश्वर ८ बी ले ५० हजार प्राप्त गरेको छ।
काठमाडौं क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राईको प्रमुख अथितीमा उक्त कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भएको हो। यसैगरी विशेष अथितीमा प्रदेश सभा सदस्य छिरिङ दोर्जे लामा, गोनपा मेयर सन्तोष चालिसे, गोनपा उपमेयर शान्ति नेपाल लगायत सभापतिमा दिपक लामा रहेका थिए।
कार्यक्रमको अथितीहरुमा गोनपा वडा नं ८ का अध्यक्ष मनोज कुमार ढुङ्गाना, वडा सदस्य नवराज लामा , आतरखेल महिला समाजकी अध्यक्ष शोम माया लामा, युवा समाज सेवी लाल बहादुर तामाङलगायतका वडाअध्यक्षहरु रहेका थिए।
उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिले पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको उद्धघाटन गर्दै नयाँ पुस्तालाई फुटबलमा लाग्न उत्प्रेरित गर्न यस्ता प्रतियोगिताले सहयोग गर्ने बताए।
मेयर कपमा गोनपाका मेयर सन्तोष चालिसेले फुटबलको बिकासका निम्ती आफूले फुटबल प्रतियोगिताको आयोजना गरेको बताए। उनले गोनपाले दुईवटा ठुलो फुटबल मैदान निर्माण गर्ने जानकारी समेत दिए।
वडा नं ८ का अध्यक्ष मनोज ढुङ्गानाले जित्नु मात्र ठुलो कुरा नभएको बताए। उनले अनुसासित भएर खेललाई सभ्य र भब्य बनाएकोमा सबैलाई धन्यबाद ज्ञापन गरे।
जोरपाटी फुटबल क्लबको आयोजना भएको प्रतियोगिमा उत्कृष्ट खेलाडी गोकर्णश्वार वडा ८ जर्सी नम्बर ७ किरण लामा थिङले १० हजार प्राप्त गरे, सर्वाधिक गोलकर्ता दिनेश राई, उत्कृष्ट गोल रक्षक कृष्ण चौधरी र उत्कृष्ट प्रशिक्षक बहादुर योगीले ५र५ हजार पाएको छ। प्रतियोगितामा फेयर प्ले टिम गोकर्णेश्वर वडा ३ ‘बी’ ले १० हजार प्राप्त गरे।
कार्यक्रमका सभापति दिपक लामाले सबैलाई स्वागत गर्दै जोरपाटी फुटबल क्लव स्थापना हुनुको उद्देश्य खेलाडीको स्तरबृद्धि गर्नु रहेको बताए। महिला रेफ्रीहरुले मात्र संचालन गरेको प्रतियोगिताका सबै उत्कृष्ट खेलाडीले सम्मान ५/५ हजार प्राप्त गरे।